Izityalo ezihlambulula umoya: ezona ntlobo zibalaseleyo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 13/04/2022 12:00 | Ikhaya eliGreen
Umoya emakhayeni ethu nakwiindawo esisebenza kuzo uya usiba mbi. Yindlela yethu yokuphila ekhokelele ekunyukeni kwenani leemveliso ezenziwe ngemichiza kumakhaya ethu ezikhupha iikhompawundi eziguquguqukayo zezinto eziphilayo eziyingozi empilweni. Ezona zixhaphakileyo zezi: formaldehyde, trichlorethylene, benzene, xylene, toluene, carbon dioxide kunye neammonia, ezinye zazo zineziphumo eziqinisekisiweyo zecarcinogenic. Ukujongana nale meko, kukho ezahlukeneyo izityalo ezihlambulula umoya.
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi izityalo eziphambili ezihlambulula umoya kunye nendlela ezinokukunceda ngayo.
1 Iinzuzo zezityalo ezihlambulula umoya
2 izityalo ezihlambulula umoya
2.3 ulwimi lwengwe
2.5 Iqhiya yentloko
2.6 UFicus robusta
2.7 umthi wesundu waseTshayina
2.8 Umboko waseBrazil
2.9 IsiNgesi ivy
3 Umthi wesundu
Iinzuzo zezityalo ezihlambulula umoya
Izityalo zineenzuzo ezininzi ekhaya. Ukongeza ekusebenzeni njengabahlaziyi bomoya bendalo kwezinye iimeko, nabo banciphisa ingxolo, baphucula isimo sengqondo kwaye bahlambulule okusingqongileyo. Khumbula ukuba ebudeni be<em>photosynthesis, izityalo zithabatha ikharbon diokside kwindawo engqongileyo zize ziyiguqule ibe yioksijini, nto leyo efunekayo ukuze umntu aphefumle.
Ezinye zazo ziluncedo ngakumbi kunezinye xa kufikwa ekucoceni okusingqongileyo nasekuhluzeni izinto ezingcolisayo. I-NASA yenze uphando lwezenzululwazi ngasekupheleni kweminyaka yee-1980, i-NASA i-Clease Air Study, ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona nto isebenzayo kulo mba. Abaphandi benjenjalo uluhlu lwezityalo ze-20 zokucoca eziluncedo ngokukhethekileyo ekucoceni umoya kwiindawo ezivaliweyo.
Umbhali okhokelayo wokufunda, uBill Wolverton, isazinzulu saseMelika esisebenza kwikhemistri, i-microbiology, i-biochemistry, kunye nobunjineli bokusingqongileyo. Unqume ukuba ezintlanu kwezi zityalo zezona zilungileyo zokufumaneka nokusebenza. Uluhlu oluchazwe nguWolverton kumajelo ohlukeneyo lusasebenza kwaye lunika umdla, ezi zityalo zinokususa izinto ezinobungozi emoyeni ezifana ne-formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide okanye trichloroethyl.
Sesinye sezona zityalo zicocayo kwaye yenye yezona zinto zilula ukuzigcina. Ukubeka esi sityalo ekhayeni lethu kunciphisa izinto eziphilayo eziguquguqukayo ezifana ne-formaldehyde, i-xylene kunye ne-toluene. ziyingozi empilweni, kwaye iyasebenza nasekususeni iacetone, trichlorethylene kunye nebenzene.
Inzalelwane kumahlathi ashinyeneyo akuMbindi noMzantsi Melika, idinga indawo enokukhanya okungathanga ngqo, kwaye nangona ithanda ukufuma, ayifane inkcenkceshelwe, kwaye igumbi lokuhlambela elinokukhanya kwendalo liyindawo efanelekileyo kwesi sityalo.
Esinye sezityalo ezingcono zokucoca umoya ngokubanzi. Iyaziwa ngokusetyenziswa kwangaphakathi. Lo mthi wesundu ubonakala ngokulula kwimihombiso yeVictorian kunye nakwimovie yexesha. Isizathu kukuba iphila ngolonwabo ngaphakathi ngaphandle kwesidingo sokukhanya kwelanga. Ukongeza, kukho ukhathalelo oluncinci olufunekayo ukuyigcina ikwimo ephezulu. Lo mthi wesundu uyinzalelwane yaseMadagascar. Kodwa namhlanje isehlabathini lonke. ILas Palmas igxile ekukhupheni iformaldehyde, benzene, kunye necarbon monoxide (iluncedo ngakumbi ukuba kukho umntu otshayayo ekhayeni lakho).
Isetyenziselwa ukufunxa initrogen oxides kunye ne-formaldehyde. Sesinye sezona zityalo zasendlini zixhathisayo ezikhoyo. Eyaziwa njengengenakonakala. Ixhathise indawo eshushu, eyomileyo yegumbi, ukukhanya okuluzizi, ukunkcenkceshela okungahoywanga, iminyaka ngaphandle kokuphinda kufakwe imbiza, izinambuzane kunye nezifo, malunga nayo nantoni na.
Yeyona ilula ukuyigcina. Inamagqabi egolide amile okwentliziyo kwaye idumile eMntla Melika. Sisityalo esomeleleyo inokuphila ekukhanyeni okuphantsi kunye namaqondo obushushu apholileyo, okwenza ukuba ilungele iiofisi kunye namakhaya njengoko ikhupha i-carbon monoxide kunye ne-formaldehyde emoyeni. Iqinile kakhulu kwaye ikhula ngokukhawuleza. Ekhaya, ikhetha ukukhanya okukhanyayo okungathanga ngqo kunye nomhlaba omanzi. Iphelele kwigumbi lokuhlambela okanye ekhitshini.
Iphelisa i-carbon monoxide kunye nezinye i-toxins kunye nokungcola. Sesinye sezityalo ezintathu eziphezulu zokususa i-formaldehyde emoyeni. Kulula ukunyamekela kwaye ubushushu obufanelekileyo, ukunkcenkceshela kunye nokukhanya, izityalo zakho ziya kuphila iminyaka emininzi.
Inyamezela ukukhanya okuphantsi kunye nokubanda kakuhle. Ziyakwazi ukumelana nembalela kwaye aziyi kufa ukuba zilibele ukunkcenkceshela kuba zigcina amanzi ezingcanjini zazo.
Luhlobo oluhlala luluhlaza lwe-genus ye-Ficus inzalelwane yasemntla-mpuma weIndiya (Assam), emazantsi e-Indonesia (iSumatra kunye neJava). Yaziswa eYurophu ngo-1815 njengesityalo sendlu. Enye yezona zinto zilula ukuzigcina. Ukubeka esi sityalo ekhayeni lethu kunciphisa i-formaldehyde, i-organic compound eguquguqukayo eyingozi empilweni.
umthi wesundu waseTshayina
I-Raphis excelsa sisundu esinezimbiza ezinomtsalane ekulula ukusihoya kwaye asifuni kukhanya kakhulu. IRaphis excelsa, ekwabizwa ngokuba yingca yenaliti yegolide yaseTshayina, Ineentlobo ezininzi ezinobude obuyimitha enye enesiqingatha. Yehlisa i-formaldehyde kunye ne-benzene, iikhompawundi ze-organic eziguquguqukayo eziyingozi empilweni.
Igama layo lesayensi yiDracaena kwaye lilungu lentsapho ye-agave. Isuka kwitropiki yaseMelika kwaye sisihlahla esihlala siluhlaza. Ibonakala ngesiqu esimdaka esikhanyayo esinezangqa ezithe tye. Amagqabi ajinga, amile okwelance, kwaye agqamile ngenxa yombala wawo oluhlaza oqaqambileyo kunye nemigca emthubi ehamba kuwo.
Ezi ntyatyambo zihluma kuphela kwimizekelo yabantu abadala abafikelela kubude obuthile (ngokuqhelekileyo iimitha ezimbini) kwaye bavelele ngenxa yevumba labo elinxilisayo. Ithanda ukuqhakaza rhoqo kwaye inciphise iikhompawundi eziphilayo eziguquguqukayo ezifana ne-trichlorethylene kunye ne-xylene, eziyingozi empilweni.
Sisityalo esiqhelekileyo sokunyuka esinokunyuka iimitha eziliqela ngaphezu komhlaba kwaye sinokunyuka phantse naluphi na uhlobo lomphezulu, njengemithi, amatye, iindonga. Ukuqokelela amagqabi kunye neziqu kunokwenziwa nangaliphi na ixesha lonyaka, nangona kungcono ukuyenza ngaphambi kokutyatyamba. Yehlisa iikhompawundi eziphilayo eziguquguqukayo eziyingozi empilweni, ezifana ne-formaldehyde, i-trichlorethylene kunye ne-benzene. Lomdiliya kunzima kakhulu ukuwukhulisa, uthanda ukubanda kunye nokufuma, kwaye unokugcinwa kwiimbiza ezikwibalcony.
Isebenza njenge-humidifier yendalo. Sisityalo esiyinzalelwane yaseTshayina kwaye ikhule kwihlabathi lonke. Okwangoku inokusetyenziswa njengenxalenye yokuhlobisa izindlu, iigadi kunye neepatio. Ngenxa yeempawu zayo ezizodwa, sisityalo esidinga ukugcinwa okuncinci.
Isusa i-benzene, i-formaldehyde kunye ne-trichlorethylene. Esi sityalo sasekhaya sithandwa kakhulu sikhula kwiimeko eziphantsi zokukhanya kwaye ayifuni kunkcenkceshelwa kakhulu, isenza ukuba silungele abo bahlala belibala ukunkcenkceshela izityalo zabo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nezityalo ezihlambulula umoya kunye neenzuzo zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » izityalo ezihlambulula umoya